Taliska Ciidamada PMPF Oo Ka Hadlay Weerarkii Bali-khadar[ DAAWO] | SAHAN ONLINE
Taliska Ciidamada PMPF Oo Ka Hadlay Weerarkii Bali-khadar[ DAAWO]
BOSASO- Taliyaha ciidamadda badda Puntland ee PMPF Admiral Cabdirisaaq Diiriya Faarax ayaa shir jaraa’id oo uu caawa ku qabtay magaaladda Bosaso wuxuu faahfaahin ka bixiyay weerarkii kooxda Alshabaab ay ku soo qaadeen Saldhiga Ciidamada ee Bal-khadar iyo dagaal kale oo maalintii xigtay dhexmaray ciidamada Puntland iyo Alshabaab.
Wuxuu sheegay in ciidamada PMPF iyo kuwa PSF ee Puntland ay weerar ku qaadeen maleeshiyaadkii soo weeraray Saldhiga Bali-khadar oo ku sugnaa degaan 12 Km dhinac koofur galbeed kaga beegnaa saldhiga, halkaasi oo uu sheegay inay ku aasayeen ragii kaga dhintay weerarkii habeenkii 2dii bishan June.
“ dagaal ayaa halka ka dhacay, waxaana gacanta sare yeeshay ciidamada Puntland. Isku dar waxaa shabaab ka dhintay 53 nin, waxaana kaga dhaawacmay tiro badan, wax bad qaba waxaa meeshaas ka baxay ilaa 5 nin oo kaliya” ayuu yiri
Taliyuhu wuxuu sheegay in khasaaraha ka soo gaaray ciidamada PMPF weerarkaasi uu yahay 4 dhimasho ah iyo 13 askari oo dhaawac ah. waxaa kaloo uu sheegay in weerarkii habeenkii dhacay ay khasaare ka soo gaareen Gaadiidkii ciidamadu wateen.
“ Weerarkaasi wuxuu dhacay saacadu markay ahayd 11;30 habeenimo, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal khasaar dhimasho iyo dhaawac gaystay, wayna isaga baxeen meeshaasi nimankii weerarka soo qaaday” ayuu yiri taliyaha
Halkan Ka Daawo Shirka Jaraa’id ee Taliyaha